Dusit International inovhura yakasarudzika Wellness resort muSuzhou, China
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Dusit International inovhura yakasarudzika Wellness resort muSuzhou, China
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Dusit International yakaenderera mberi nekuwedzera kwayo muChina nekuvhurwa kwazvino kweinotarisirwa kwazvo Dusit Thani Wellness Resort Suzhou, Jiangsu - iyo gumith Imba yakashambadzirwa muChina.
Inowanikwa muShushan Ecological Village, nzvimbo yerunako rwenzvimbo muSuzhou yeguta reHuqiu, maminetsi makumi matatu chete nemotokari kubva kuSuzhou chiteshi chechitima chepamusoro, nzvimbo iyi inosanganisa tsika dzekumaodzanyemba kweChinese neyaThai-yakafarirwa yekugamuchira vaeni. Mhedzisiro yacho rakasarudzika ruzivo rwehoridhe kuendesa zvakanyanya mukunyaradza, nyore, uye hutano hwakakwana.
Inosanganisira makamuri zana nemakumi masere nemashanu uye dzimba dzekusaina dzakagadzirirwa kuratidzira hunyanzvi hwetsika nemagariro mukati memahotera eShushan akapoteredzwa, nzvimbo yekutandarira iri parutivi rwegungwa rine runyararo neminda ine runyararo. Pamwe pamabhalkoni anopa maonero akajeka enzvimbo inoyevedza, inozivikanwa nehupfumi hwayo hutatu kusanganisira Cui Guan Pear, Yun Quan Tea, uye Waxberry.
Iyo ine runyararo uye inoyevedza nzvimbo inoshanda seyakakodzera mamiriro kune iyo chivakwa yakasarudzika inotarisa pane hutano hwepfungwa, muviri nemweya. Kubva pane yakasarudzika matsime anopisa ruzivo, ichipa ese anonhuwirira uye ekurapa madziva, kune deluxe Thai-yakafuridzirwa Devarana Spa, uye maresitorendi maviri anoshandira akagwinya chikafu chikafu - kusanganisira maSouth Chinese anodikanwa, akakurumbira Thai madhiri, uye epasi rose mutengo - chese chinhu cheiyo resort ine yakanyatsogadzirwa kusimudzira kugara zvakanaka kwevaenzi vayo.
Kuti uve nechokwadi chekuti vashanyi vanogona kuwana zvakanakisa kubva muchiitiko, Dusit Thani Wellness Resort Suzhou, Jiangsu inopa huwandu hwenzvimbo dzekugara dzakanaka dzinosanganisa pekugara pakanaka nemitezo yehutano, kudya kunovaka muviri, matsime anopisa ekugezesa, kurapa masaja, Chinese toni-toni kurapwa, uye zvimwe zvakanaka-zvakatarisana zviitiko. Zvigadziriso zvakagadzirirwa zvinogona kugara pakati pemazuva maviri kusvika gumi nemana, zvinoenderana nezvinodiwa uye zvinangwa zvemumwe muenzi.
Kupemberera kuvhurwa kwayo, nzvimbo yekutandarira iri kupa iyo 'Dusit Experience' package inotangira kubva paUS $ 210 chete pahusiku. Inonyanya kugadzirwa kuti ipe nzvimbo yekuzorora zvechokwadi, pasuru yacho inosanganisira pekugara muDeluxe Lake View Kamuri, kudya kwemangwanani kwezuva kweviri, kwekumborororwa-mumba mekunonoka, uye nezvimwe zvakanaka zvakawanda. Chitubu chinopisa chiitiko chevanhu vaviri chinowanikwa kune yakawedzera CNY 200. Chipo chinopera 31 Zvita 2020.
Sandals Foundation inopa kudzosera Smith's Reef ...